Diinnii Maal Balleesse?! – Welcome to bilisummaa
Diinnii Maal Balleesse?!
bilisummaa May 30, 2015	1 Comment
Badii maalii qaba diinni?
Nutu karra saaqeef, balabala banee olgalche.
As taa’i jennee teessoorraa kaaneef.
Cooma murree afanitti gurshine.
Qe’ee bal’aa itti agarsiifne.
Tumaalessaafi sangaa qotiyyoo itti lakkoofne.
Boora yaabbii shaakalsiifne.
Qabannaa dheeboo shaakalsiifne.
Miila irraa dhiqnee ol dabarsinee diinqarra ciibsine, ofii diinqarraa kaaneef.
‘Rafi’ jennee balbala duuban cufneef.
Inni maal balleesse?!
Akkamiin haa ka’u siree hoo’ituu irraa?
Eenyu haa dammaqsu hirriiba mi’ooftuu irraa?
As ilaalee achi ilaalee, bitaafi mirga daawwatee godoo abbaan koo ijaara na dhaale.
Qabannaa dheeboo ani shaakalsiise natti naanneffate.
Qe’eerraa na hari’ate.
Araddaa koo na dhuunfate.
Inni maal balleesse?
Karoora isaa galmaan ga’uuf dhufe.
Galmaan ga’achaa jiras.
Dammaafi aannan nyaachutti jira.
Lafa bal’aa irra jiraachaa jira.
Kaayyoon isaa galma ga’eefira.
Kan dagate nu’i. Badii guddaa nutu qaba.
Badii badii caalu.
Yakka. Uumaa keenya shakkine.
Akka harree malkaatti fincoofne.
Odaa murree bobeessine.
Hangafa kabaja dhorkanne.
Gaachana bilii nyaachifne.
Dheeboo suuqattii qaqaadhan xureessine.
Diinaaf dabarsinee walkennine.
Daldala garbaa irraanfatame as deebisne.
Goota owwaallee shamarraaf weeddisne.
Qabannaa ulee daganne.
Diinatti darabaa galle.
Iccitii walii keenyaa baasnee gabatti afarsine.
Kanaafi, kanaafi kan malkaan bishaan nu dide.
Kanaaf burqaan bishaan goge.
Kanaaf dacheen Oromiyaa goota liqimsuu malee goota biqilchuu didde.
Odaan gaaddisa ta’uu dide.
Gogee mandhee cirrii ta’e.
Kanaaf sigabaan nu dhaale.
Kaanaf dhiirri dhiiraf jilbiinfate, gugguufee sagade.
Weennin korrisa didde.
Barii lafa dagatte.
Leenci akka harree halaake.
Sangaan fardaa keenya gulufa jibbee gaarii harkisuu filate.
Maanguddoon keenya jaarsummaa dagate, qunduftii adamsuu filate.
Beerri keenya ililcha dheebottee watwaata amaleeffatte.
Diinni maal balleesse?!
Nu’i abbaan yakkaa.
Haa kaanu, malkaa bunee tulluu baanee, araara yaa kadhannu, bilisummaan nuuf haa deebitu. Ilmaan Booranaafi Baarentuu waliif yaa yaadu.
Lafa jiruu wal yaa iffaafatu.
Uuman nuuf yaa araaramu.
Gaashaafi eeboo lafa keenyee haa barbaannu.
Farda gaarii irraa haa hiiknu Hojii isaatti haa deebisnu.
Bariitee Abbaa Haqaatii, Boolee irraa
Tags aadaa afaan afoola walaloo
Previous GARAAGARUMMAA GOOFTAA KIRISTIYAANAA FI WAAQA WAAQEEFFANNAA
Next Ethiopia ARMY RAID Kenya 3rd time in two weeks, KILLS a Local in Moyale and nothing is done!
Oromo,qaraan harkaan dhabaan debi’e namaa guba